Hoyga Ex-RW Najib Razaq oo laga soo saaray lacag & dahab caqliga ka baxsan (Daawo Sawirada) | Allbanaadir News	Hoyga Ex-RW Najib Razaq oo laga soo saaray lacag & dahab caqliga ka baxsan (Daawo Sawirada)
Hoyga Ex-RW Najib Razaq oo laga soo saaray lacag & dahab caqliga ka baxsan (Daawo Sawirada)
May 18, 2018 - Aragtiyood
Saraakiisha Booliiska dalka Malaysia ayaa sheegay inay qabteen boqollaal kaartoon oo ay ka buuxaan waxyaabo qaali ah iyo boorsooyinka ay ka buuxaan lacago qalaad kuwaasoo laga helay guri lala xiriiriyay ra’iisul wasaarihii hore ee dalkaas Najib Razaq.
Hawgallada booliisku ay ka sameeyeen xafiiska Najiib, guriga uu dagan yahay ee khaaska ah iyo dhismeyaasha kale ee lala xiriiriyay oo ku yaalla bartamaha magaalada ayaa socday maalmihii la soo dhaafay iyadoo warbaahinta loo soo bandhigayo.
Amar Singh oo booliiska u hadlay ayaa saxafiyiinta u sheegay in waxyaabaha la soo qabtay ay ku jiraan 284 boorso oo kuwa qaaliga ah gacanta lagu qaato.
“Askarta ayaa baartay 72 boorso oo ka mid ahna waxaa laga helay lacago kala duwan oo ay ka mid yihiin midda Ringgit ee dalka Malaysia, doolar iyo walina dahab iyo saacado.
“Qiyaasta saxda ah ee dahabka ma sheegi karo, waayo aad bay u badan yihiin boorsooyinka ay saacadaha iyo dahabku ku jiraan” ayuu yiri sida ay ka soo xigatay wakaaladda wararka ee Reuters.
Baaritaanada lagu sameeyay dhismeyaasha ku yaalla Kuala Lumpur ayaa lala xiriiriyay baaritaanno lagu hayo dhaqaalaha mashruuca horumarinta ee 1MDB.
Eedaymaha musuqmaasuqa ee loo soo jeediyay mashruuca 1MDB ayaa qayb wayn ka ahaa waxyihaabihii guul darrada u horseeday Najiib, doorashadaasna waxaa ku guulaystay Mahathir Maxamed oo ay horay xulafo u ahaan jireen.
Waxaa jira balaayiin doolar oo aan la xisaab xirin oo qayb ka ahaa mashruucan uu Najiib sameeyay.
Najib laftirkiisa ayaa lagu eedeeyay inuu qaatay 700 oo milyan oo doolar, taas oo uu mar kaste diido.
Dawladda Malaysia ayaa sheegtay inuusan wax gaf ah samaynin, balse dhawr dal oo kale ayaa baaritaan ku billaabay.
Ra’isul wasaaraha cusub ayaa sheegay inuu ka baaraan dagayo inuu dib u furo dacwaddaas, wuxuuna rumaysan yahay in dib loo heli karo lacagta la lunsaday. Najiibna wuxuu ka mamnuucay ka bixitaanka dalka.